Afak’omaly alina vao tamin’ny 8 ora sy sasany alina no nitranga ny loza. Teo Ankadilalana, fokontany Andranomalaza, kaominina Sadabe, distrikan’i Manjakandriana no niseho ny fanafihana. Voa teo
ambanin’ny masony an-kavia i Pastera. Vao naharay antso ny zandary tao amin’ny borigadin’i Sadabe dia nirohotra avy hatrany nidina ifotony tany an-toerana. Nirifatra nanjavona tany anaty
haizina ireo jiolahy vao vita ny tifitra. Mbola mitohy ny fanadihadian’ny zandary raha sotasotam-piarahamonina izao na fikasana saika hangalatra. Nentina nihazo fitsaboana teo amin’ivontoeram-pitsaboana Andranomalaza avy hatrany ity pasteran’ny FJKM ity ary avy eo nentina niakatra nihazo ny hopitaly lehibe aty an-drenivohitra. Nanampy tamin’izany ny fiara tsy mataho-dalan’ny zandarimariam-pirenena any an-toerana izay tsy natao hiarovana ny asan-dahalo sy iadiana amin’ny jiolahy fotsiny fa manampy ny mpiara-belona amin’ny fitondrana marary koa. Zandary roa avy ao amin’ny tobim-paritra Sadabe no nanara-dia ny marary ho fitandrovana hatrany ny fandriampahalemana sy ny filaminana teny an-dalana, nandritra ny alina. Efa tsy mifaditrovana ireo tambajotran’ny ratsy, fofoiny hatramin’ny ain’ny mpitondra fivavahana.